E gosipụtara ọnụahịa Xiaomi Mi 9T Pro maka ahịa Europe | Gam akporosis
Nke a bụ ọnụahịa nke Xiaomi Mi 9T Pro maka ahịa Europe, nke ga-abata n'oge na-adịghị anya
Anyị ka na-eche maka Xiaomi Mi 9T Pro maka Europe, mpaghara nke ọ na-esitebeghị n'aka ndị na-emepụta China. Naanị mba nwere ya bụ China na India - nke a na - akpọ Redmi K20 Pro-, mana nke a bụ naanị maka oge ahụ, dịka a na - emesi ọbịbịa ya na mpaghara a ike. Ka ọ dị ugbu a, ị nwere ike ịzụta ya Anyị 9T (Redmi K20) na mba dị iche iche, ọ bụ ezie na atụmatụ ndị a na-enye n'etiti igwe anaghị ezuru ụfọdụ ndị na-azụ ahịa, ọ bụ ya mere enwere ndepụta ogologo nke ndị Fans na-echere njedebe a.
Mi ụlọ ọrụ kwadoro Mi 9T Pro dị ka Bluetooth SIG maka ahịa Europe ọtụtụ ekwuola maka ụbọchị ọ ga-ewepụta ya. Ma, Xiaomi enyebeghị ozi banyere ụbọchị a ga-eme ya ọkwa maka kọntinent ahụ. N'agbanyeghị nke ahụ, aro ndị kachasị ọhụrụ na-egosi na nke a ga-abụ ọnwa ọ ga-abịarute. Ma ugbu a, e gosiputala ụgwọ ya, na anyị na-atụle ya n'okpuru.
Belsimpel bụ onye nkesa na-ahụ maka ngwa ahịa Xiaomi na Netherlands. Na otu n'ime ndepụta gị Mi 9T Pro agbaghaala, ọnụahịa ya kwa. N'ebe ahụ, ọ dị na acha anụnụ anụnụ, nwa, ọbara ọbara na nhọrọ ọcha. Ọzọkwa, ọ pụtawokwa na nsụgharị 64 na 128 GB ROM.
A ga-ere Mi 9T Pro na 6 GB Ram + 64 GB nke ebe nchekwa dị n'ime 429 euro, mgbe Mi 9T Pro na 6GB RAM na 128GB nke ROM dị ọnụ 479 euro. Ndepụta ahụ na-ekwu na ekwentị "na-atụ anya n'oge na-adịghị anya", mana ọ na-enye nhọrọ ịnye iwu, nke ga-abụ, karịa ihe ọ bụla, nhọrọ ịchekwa ya. Ọnụahịa ndị a zuru ezu ga-abụ otu maka mba ndị ọzọ dị na Europe ma ọ bụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ, yiri nnọọ. Ya mere, anyị nwere ike ị nwetaworị echiche ma chekwaa ego iji nweta ya n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nke a bụ ọnụahịa nke Xiaomi Mi 9T Pro maka ahịa Europe, nke ga-abata n'oge na-adịghị anya
The Galaxy A50 na-enweta ule ntachi obi kachasị ama